Trump Oo Sheegay Inuu Xiriir Wanaagsan Ka Dhaxeeyo Yahuuda Iyo Maamulka Aala Sacuud. – Bogga Calamada.com
Trump Oo Sheegay Inuu Xiriir Wanaagsan Ka Dhaxeeyo Yahuuda Iyo Maamulka Aala Sacuud.
February 12, 2018 6:15 pm Views: 97
Madaxweynaha dowladda saliibiyada ah ee Mareykanka ah, Donald Trump ayaa markale ku celiyey in Qadiyadda magaalada Qudus ay ka gudubtay miisaska wadahadalada, go’aan adag laga gaaray ka dib markii uu dhawaan ku dhawaaqay in ay tahay caasimadda Yahuudda, islamarkaana uu amar ku bixiyey in safaaradda Mareykanka laga soo raro magaalada Tal-Abiib loona soo raro Qudsu-Shariif.
“Si aan Qadiyadda Qudus kaga saaro miisaska wadahadalada, waxaan go’aansaday in aan magaaladaas u aqoonsano in ay tahay caasimadda Yahuudda, sidaas ayeyna arintu ku soo dhamaatay, wixii hadda ka dambeeyana waan taageeri doonaa heshiisyada nabadeed ee labada dhinac” ayuu yiri Trump xilli uu la hadlayey wargeys ay Yahuudu leedahay.
Erayada Trump uu adeegsaday intii lagu gudajiray wareysigan waa isla erayadii uu adeegsaday markii uu magaalada Davos kula kulmayey Ra’isul Wazaaraha Yahuudda Bin Yamin Nataniyahu. “Arinta Qudus waan soo afjarnay, waana ka saarnay miisaska wadahadalada, mana dooneyno in laga sii hadlo arinteeda” ayuu yiri Trump.
Donald Trump, madaxweynaha dowladda saliibiyada Mareykanka ayaa 6-dii bishii Dec. ee sanadkii la soo dhaafay ku dhawaaqay go’aan lala fajacay markii uu Qudus u aqoonsaday in ay tahay caasimadda Yahuudda. Go’aankan ayaa isbedal ku keenay mowqifkii iyo siyaasadii ay dowlada Mareykanka kula mucaamileysay qadiyadda Filistiin muddo 50 sano, waxayna toos u cadeysay sida ay kaga go’an tahya jirintaanka kiyaanka Yahuudda.
Trump xilligaas wuxuu sheegay in uu ku dhiiranayo go’aano ay in badan ka gaabiyeen madaxdii isaga ka horeeysay, islamarkaana hadda la joogo waqtigii ay Qudus u aqoonsan lahaayeen caasimadda Yahuudda.
Wargeyska uu hadda Wareysiga siiyey oo uu leeyahay maal Qabeen Yahuud ah oo lagu magacaabo Sheldon Adelson kana mid ahaa ganacsatadii taageertay ololihiisa, ayuu Trump u sheegay in ay ka go’an tahay ilaalinta danaha wadajirka ah ee ka dhexeeya Yahuudda iyo Mareykanka.
Intii lagu gudajiray wareysiga, wuxuu Trump si aan ku fogaansho lahayn kaga hadlay deegaameysiga ay wado Yahuudda ee isballaarinta, wuxuuna Nataniyahu ugu baaqay in uusan deegaameyn horleh ka bilaabin deegaano aysan dowladiisu lahayn laakiin su’aashu waxay tahay maxaa farqi ah oo u dhexeeya deegaameynta cusub ee uu diidan yahay iyo in Yahuudda deegaameyn sharci ah lagu siiyo Qudus.
Todobaadyo ka dib markii uu ku dhawaaqay in Qudus tahay caasimadda Yahuudda, Wuxuu Trump ku xigeenkiisa amray in uu boqdo mandiqadda, uuna markale sii adkeeyo go’aankiisii ahaa in Qudus ay tahay Caasimadda Yahuudda.
Mac Pensce markii uu booqday Qudus, wuxuu la kulmay Nataniyahu, wuxuuna sdoo kale khudbad dheer ka horjeediyey Baarlamaanka Yahuudda kuwaas oo uu u sheegay in dowladoodu ka go’an tahay difaaca kiyaanka Yahudda, ayna yihiin dad isku qadiyad iyo isku masaalix ah oo uu ka dhexeeyo hal cadow.
Go’aanka Marekanka uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Yahuudda waxaa ka dhasay kacdoon ballaaran iyo caro dadweyne oo ay muujiyeen Muslimiinta kuwaas oo dhigay dibadbaxyo waa weyn oo gilay gilay Min Indonisa Bari ilaa Maghrib waqooyi,laakiin carada dadweynaha ayaa goordambe iska nuxuustay ka dib markii la waayey dad shucuubta careysan ku hogaamiya wadada ciziga kana dhiidhiya go’aankaas foosha xun ee lagu boobay dhulkooda.
Dowladaha dhawaaqiida ayaa dadaal xoogan ku bixiyey sidii ay u dajin lahaayn carada dadweynaha, xaaladuna ugu soo noqon lahayd si caadi ah kuwaas oo ugu dambeyntii ku guuleystay in shucuubta laga keexeeyo fagarayaasha kacdoonak marka laga reebo Muslimiinta reer Filistiin oo weli hortaagan awoodda gumeysiga.